Arirarira tsy ahitan-drariny ny fototry ny olana | NewsMada
Par Taratra sur 11/11/2016
Kolikoly avo lenta, kiantranoantrano, fisian’ny tsimatimanota, tsy fanarahan-dalàna, fanagadrana izay mihetsika, fivarotan-tanindrazana, harem-pirenena gaboraraka, tsy firaharahana ny hafa, tsy fanajana ny teny nomena… Ireo no olana fototra amin’ny fitondrana, fa tsy ny hoe ny maha voafidy azy na tsia, ny fananan’ny maro anisa, mahasolo tena ny vahoaka…
Be ny raharaha maloto sy tsy mazava, vitavita ho azy: odian’ny mpitondra tsy hita, fa arirarira amin’ny hoe fibanjinana ny fampandrosoana, fitadiavana fitoniana sy fahamarinan-toerana. Eo, ohatra, ny amin’izay fifanarahana ambadika amin’ny Sinoa momba ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany etsy sy eroa. Na ny amin’ilay volamena 20 kilao aza: an’iza marina, aiza?
Ahoana ny amin’ny kolikoly teny amin’ny Antenimierampirenena? Tsy avelan’ny birao maharitra hanadihady ifotony ny Bianco. Ny amin’ny baomba nipoaka teny Mahamasina ny 26 jona hoe nataon’ny mpanohitra, nitsoaka any ivelany. Fantatra ihany izany: iza? Eo ny andramena 30 000 any Singapour, ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny “Raharaha Anjozorobe“…
Vokatr’ireo tsy fanjariana afitsoky ny mpitondra ireo: manjaka ny tsy fandriampahalemana, tsy fanjarian-tsakafo, tsy misy izay famoronana asa, midangana ny vidim-pianana, tsy afaka ny delestazy… Izay no tsy zakan’ny vahoaka amin’izao, fa tsy hoe mitady paradisa an-tany na fiainana tonga lafatra izy. Endrika isehoan’ny tsy fahatokisana mpitondra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa.
Izay mijoro efa tsy marin-toerana sy mihilangilana no mila tohana? Maniry toy ny anana ny karazana vovonana hoe manohana fitondrana tato ho ato. Hampiverina fandriampahalemana ve izany? Na hanafoana ny delestazy, ny kolikoly, ny tsimatimanota… Tsy vitan’ny fanaovana fanambarana ny raharaha, fa mitaky asa. Raha ny mpanohitra, tsy manao ny asany raha tsy mitsikera.
Vao mainka mandranitra vahoaka ny fiheverana azy ho zaza sy bado, tsy mahalala izay fototry ny olana. Manana izay takiny amin’ny mpitondra izy, fa asaina miandry sy miaritra lava; raha tsy izany, gadraina izay mihetsika… Mandra-pahoviana?